Barattooti Oromoo Yuuniversitii Wallaggaa 200 Ta’an Hidhaman, 26 Ammoo Warnaana Wayyaaneen Reebamii 1 Ajjeefamuun FDG Caalaatti Itti Fufsiise. | QEERROO
Barattooti Oromoo Yuuniversitii Wallaggaa 200 Ta’an Hidhaman, 26 Ammoo Warnaana Wayyaaneen Reebamii 1 Ajjeefamuun FDG Caalaatti Itti Fufsiise.
Posted on August 28, 2014 by Qeerroo
Hagayya 28,2014 Naqamte
Barattooti Oromoo Yuuniversitiilee adda addaa keessatti humnaan walitti qabamanii akka olola Wayyaanee baratan yeroo taasifamuu yaaluun roorroo uumata Oromoo irratti hammaatee jiruu fi gaaffiin hundee qabsoo Oromoo waan hin deebi’iiniif daran diddaa barattootaa jabeessuun guutummaa Oromiyaa keessatti Fincila Diddaa Gabrummaa(FDG) qabsiisee jira.
Haala kanaan Yuuniversitii Wallaggaa keessatti FDG Hagayya 27,2014 jabaatee itti ooleen baratooti 200 ol hidhamanii tokko waraana Wayyaaneen ajjeefamee 26 ammoo gara malee reebamuu irra darbee qabamanii mana hidhaa magaalaa Naqamtee jiru keessatti ugguramanii jiru. Barttooti 26 haalaan miidhaman kuniin:-
Barataa Yaadataa Luuccee,barataa Injineeriingii waggaa 2ffaa.
Barataa Addisuu Beekamaa, barataa Injineeriingii waggaa 4ffaa.
barataa Daani’eel Kumarraa, barataa Fayyaa waggaa 3ffaa.
Barataa Gammachiis Camadaa, barataa Economics waggaa 2ffaa
BarataaTarreessaa Nagarii, barataa Seeraa waggaa 4ffaa.
Barataa Eebbaa Tesfaayee, barataa Accounting waggaa 1ffaa.
Barataa Adduunyaa Geetinnet, barataa Injineeriingii waggaa 2ffaa.
Barataa Gurmeessaa Bantii, barataa Seeraa waggaa 3ffaa.
Barataa Firaa’ol Tuujubaa, barataa, Political Science and Governance waggaa 2ffaa.
Barataa Guutamaa Xiiqii, barataa political Science and Governance waggaa 3ffaa.
Barataa Caalchisaa Gammachiis, barataa Seenaa waggaa 3ffaa fa’aa
Barataa Baay’isaa Warqinee, barataa Management waggaa 2ffaa.
Barataa Tamasgeen Shifarraa, barataa Computer Science waggaa 2ffaa.
Barataa Firoomsaa Baalchaa, barataa Injineeriingii waggaa 3ffaa.
Barataa Fufaa Qaabataa, barataa fayyaa waggaa 3ffaa.
Barataa Taaddalaa Irranaa, barataa Injineeriingii waggaa 4ffaa.
Barataa Yaadanii Mootii, barataa seeraa waggaa 2ffaa.
Barataa Firaa’ol Beqqelee, barataa Management waggaa 1ffaa.
Barataa Guddinaa Tulluu, barataa Biology waggaa 3ffaa.
Barataa Rabbumaa Jirraa, barataa Geography waggaa 1ffaa.
Barataa Guutuu Immaanaa, barataa Seeraa waggaa 4ffaa.
Barataa Caalaa Fayyeeraa, barataa Injineeriingii waggaa 4ffaa.
Barataa Namarraa Guutaa, barataa Accounting waggaa 2ffaa.
Barataa Cimdii Dhufeeraa, barataa Fayyaa waggaa 3ffaa
Barataa Siifan Qixxaataa, barataa Economics waggaa 1ffaa.
Barataa Dinquu Jaatanii, barataa Journalism waggaa 2ffaa.
Kanneen jedhaman dha.
Galmee hidhamtoota walii gala Qeerroon gama fuula duraatti ni dhiheessa.
4 thoughts on “Barattooti Oromoo Yuuniversitii Wallaggaa 200 Ta’an Hidhaman, 26 Ammoo Warnaana Wayyaaneen Reebamii 1 Ajjeefamuun FDG Caalaatti Itti Fufsiise.”
Sooressaa Tashoomaa on August 29, 2014 at 1:31 pm said:
Odeeffannoon gara garaa dhimma FDG uummata Oromoo ilaalchisee yeroo mara dhimmitanii soquun nu biraan ga’aa jirtan, daran nu jajjabeessaa, abdii nutt horaa akkasumas, eenyummaa keenyaaf nu kakaasaa waan jiruuf, yoomillee nuuf jabaadhaa lammii ko. Galatoomaa!.
John dany on August 31, 2014 at 12:45 pm said:
Pingback: Oromo Youth: Lions led by sheep - Bilisummaa